डोरमणि पौडेल 'सिआइएको एजेन्ट' हुन् : केशव स्थापित (भीडियो)
डोरमणि पौडेल ‘सिआइएको एजेन्ट’ हुन् : केशव स्थापित (भीडियो)
२० कार्तिक २०७५, मंगलवार १७:३५
काठमाडौं, २० कात्तिक । प्रदेश नम्बर ३ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीबाट बर्खास्तमा परेका केशव स्थापितले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सिआइएसँग साँठगाँठ रहेको आरोप लगाएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबमा उनले भने, ‘ललितपुरको भैसेंपाटीमा उनको सयन कक्ष छ । उहाँको त्यो कार्यालय द एशिया फाउण्डेशनको फण्डिङमा फर्निसिङ गरिएको छ । त्यही भैंसेपाटीको घरमा उहाँले रसगुल्ला र रसपान गर्नुहुन्छ भन्छन् । तर, त्यो रसगुल्ला र रसपान के हो ? मलाई थाहा छैन् । त्यो अफिसको सबै स्टाफ र फर्निचरको फण्डिङ द एशिया फाउण्डेशनले गरेको छ।’
स्थापितले प्रदेश नम्बर ३ को अवधारणापत्र बनाउनको लागि पनि मुख्यमन्त्री पौडेलले ‘द एशिया फाउण्डेशन’ को आर्थिक सहयोग लिएको आरोप लगाए । उनले भने,‘यत्रो पैसा लिनुभन्दा पहिले केन्द्र सरकारको अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्विकृति लिनुपर्दैन ? यो विषय मन्त्रालयमा छलफल भएको छैन् । मुख्यमन्त्रीले अहिले प्रदेश नम्बर ३ को योजना आयोगको शाखा कार्यालय त्यही भैंसेपाटीको घरलाई बनाएका छन् ।’ यो विषयलाई आफूहरुले अब संसद खुल्नेबित्तिकै जोडदारसँग राख्ने पनि उनले जानकारी दिए ।
स्थापितले मुख्यमन्त्रीले आफूलाई विभिन्न पार्टी डुलेर आएको कारणले कारबाही गरेको भनेको प्रसँग कोट्याए । उनले थपे, ‘स्वयम् अहिलेको प्रधानमन्त्रीले मलाई मेरो खुट्टा भाँच्चिएको दिनमा डाकेर केशब तिम्रो र मेरो आन्द्रा गाँसिएको छ । तिम्रो मनको सपनाको एक प्रतिशत पनि दियौं भने यो मुलुक बन्छ भनेर म गएको हुँ । यो पूरानो इस्यु हो । यसको कुनै सान्दर्भिकता छैन ।’
मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध खनिएका उनले भने, ‘सफलता र असफलताको कुरा उठाउने ? उहाँ हेटौंडाको १० वर्ष मेयर भएको मान्छे होइन, त्यहाँ सहिद पार्कबाहेक अरु के छ ? कि त त्यहाँ ठींग्ग उभिने रुख छ । अशोकको बृक्ष । त्यो पनि साईनबोर्ड टाँस्नलाई राखेको जस्तो छ ।’
आफूले मुख्यमन्त्री पौडेललाई इमानका साथ बोकेको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हाम्रोमा पार्टीभित्र गुट छ । मैले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको हो । सभामुखमा पनि दाबी गरेको हो । अहिलेको डोरमणिको दाबी थिएन् । बरु अष्टलक्ष्मीको दाबी थियो । उहाँकहाँ गएर मलाई पूर्वाधार मन्त्री बनाउनु भनेर पौडेल हिँडेको हो । उहाँको हैसियत नै त्यही हो । त्यसपछि पार्टीभित्र चलखेल भएपछि भोटिङमा २४ र ३४ भयो । हामी सबै उपत्याकाले बोकेको र भोट हालेको कारण हेटौंडाको एउटा कुनामा बसेको मान्छे मुख्यमन्त्री भयो । तर, आज दम्भ देखाउने ? अहिले भर्खरै एउटा पत्रिकामा व्यंग्य आएको थियो । श्रीपेचको चोरी भनेर । यदि त्यो श्रीपेच चोरी भयो भने मेरो मुख्यमन्त्रीलाई लाईदिए भयो । अरे बाबा सर्वेसर्वा हुन्छ त ? संसद छैन । संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई नाघेर हिँड्न पाइन्छ ?’
उनले मुख्यमन्त्री पौडेलले सिआइको पैसा लिएर जिल्ला–जिल्ला र क्षेत्र–क्षेत्रमा गएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि गम्भिर आरोप लगाए । उनले भने, ‘सिआईएको पैसामा कार्यक्रम सञ्चालन मात्रै होइन, यहाँको सबै सूचना लिएर अनि सिआइलाई समर्पण गर्ने मान्छे नेकपाको सदस्य हुन सक्छ र ?’
उनले भने, ‘हिजो काग तिहार हो । अरुबेला लखेट्ने कागको तिहार छ । आज चाहीँ जहिल्यै पनि लात हान्ने कुकुरको दिन आइरहेको छ । हिजो अस्ती छेउ पर्न दिँदैन थियौं । तर, आज उनीहरुको त दिन आएका छन् । मुख्यमन्त्री त मान्छे नै हुन् । म त दयावान मान्छे हुँ । करुणाले भरिएको मन छ । सबै कुरा अहिल्यै नै छापिएपछि उनको निन्द्रा हराम होला । तिहारजस्तै लाग्दैन क्या । जीवजन्तुले त केही पाइरहेको बेला, उहाँ अजीव मान्छे हो । अहिले तिहार मनाउन दिनुपर्छ । फेरि टेन्शन हुन्छ ।’
उनले आफूले जीवनमा कहिल्यै पनि कसैको दुव्र्यवहार नसहेको र नगरेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले मसँग बोल्दा टेबुल ठट्टाएपछि मैले पनि ठट्टाएको हुँ । मैले अनियमितता गरें भनेर आरोप लगाउनुभएको छ । ती आरोपहरु प्रमाणित हुनुपर्छ । उहाँले राजधानी सार्ने कुरामा पनि गलत अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । प्रदेशको अधिकारविरुद्ध बोल्नुभएको छ । प्रदेश सभाको विषयलाई निजी विषय बनाउन मिल्छ ?’
Tagsकेशव स्थापित डोरमणि पौडेल
सरकार भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्डमा फसेको छः उपेन्द्र यादव
पूर्व राजदूत राजभण्डारीको निधन
‛बाहिरबाट उपत्यका आएका व्यक्तिलाई पीसीआर परीक्षणका लागि दबाब नदिनुहोस्’
मदारबाबाको एम्बुलेन्सले यस्ता व्यक्तिलाई निःशुल्क सेवा दिने
सरकारले ल्यायो एसिडसम्वन्धी अध्यादेश, जन्मकैदसम्मको सजायँ हुने
पहिरोमा परी मृत्यु भएका एकै घरका नौ जनाको सामूहिक दाहसंस्कार
मौसम पूर्वानुमान : कहाँ-कहाँ छ भारी वर्षाको सम्भावना ?
आईपीएल : किङ्स इलाभेन पञ्जावको सहज जित
सुनको मूल्य तोलामा १० हजारले घट्यो
पश्चिम नवलपरासीका विभिन्न ठाँउ डुबानमा